Ndị na-emepụta ihe njikwa akara okporo ụzọ - ụlọ ọrụ njikwa akara okporo ụzọ China & ndị na-ebubata ya.
Ọkụ okporo ụzọ akụ 200MM
Igwe ọkụ okporo ụzọ anyanwụ
44 Mpụta netwọk ọgụgụ isi...
22 Mpụta ịkparịta ụka n'Ịntanet nwere ọgụgụ isi njikwa mgbaàmà okporo ụzọ
Nke mbụ, onye na-ahụ maka ọkụ okporo ụzọ na-ejikọta uru nke ụfọdụ ndị na-ahụ maka njikwa a na-ejikarị eme ihe n'ahịa, na-ewere ụdị nhazi modular, ma nabata ọrụ dị n'otu na ntụkwasị obi na ngwaike.Nke abụọ, sistemụ nwere ike ịtọlite ​​​​awa 16, wee bulie oke ntuziaka raara onwe ya nye…
44 Mpụta ịkparịta ụka n'Ịntanet nwere ọgụgụ isi njikwa mgbaàmà okporo ụzọ
Ọkọlọtọ ogbugbu: GB25280-2010
Ikike mbanye ọ bụla: 5A
Voltage arụ ọrụ: AC180 ~ 265V
Ugboro ọrụ: 50Hz ~ 60Hz
Njikwa mgbama okporo ụzọ nwere ọgụgụ isi netwọọdụ
Ọrụ ngwaahịa na teknuzu atụmatụ Ngwaahịa Ọrụ na atụmatụ 1. agbakwunyere Central akara usoro, nke na-arụ ọrụ ọzọ kwụsie ike na ntụkwasị obi;2. igwe dum na-anabata nhazi modular iji kwado mmezi;3. ntinye voltaji AC110V na AC220V nwere ike dakọtara site na ngbanwe mgbanwe;4. jiri RS-232 ma ọ bụ LAN interface na netwọk ma na-ekwurịta okwu na etiti;5. Enwere ike ịtọ usoro ọrụ ụbọchị nkịtị na ezumike, yana 24 awa ọrụ nwere ike ịtọ maka atụmatụ ọ bụla;6. ruo 32 ọrụ...
Onye njikwa mgbama okporo ụzọ nwere ọgụgụ isi ahaziri ahazi
Onye njikwa ọkụ mgbama okporo ụzọ 5L
Mgbama okporo ụzọ bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke usoro okporo ụzọ obodo mepere emepe nke oge a, nke a na-ejikarị maka njikwa na njikwa akara okporo ụzọ obodo.
Onye njikwa akara okporo ụzọ 5way
Mgbe enwere arịrịọ onye na-agafe agafe, tube dijitalụ na-egosiputa ngụ oge fọdụrụnụ, dị ka egosiri na foto 2;ihe ngosi na-acha uhie uhie na-enwu ruo mgbe ọkụ ndụ ndụ na-agbanye ma gbanyụọ.
Onye na-ahụ maka mgbama okporo ụzọ 22way
Tọọ oge ọkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pịa bọtịnụ mmetụ mgbanwe ọnọdụ, ọkụ na-egosi ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agbanyụrụ, tube dijitalụ na-enwu, wee pịa gbakwunyere (+) na mwepu (-) ntọala n'otu n'otu.
Onye njikwa akara okporo ụzọ 22L
Pịa igodo ngbanwe ọnọdụ n'usoro okirikiri ka ịgbanwee ọkụ na-acha uhie uhie na oge ọkụ ndụ ndụ, ị nwere ike ịlele oge nchere na ngafe nke ndị ji ụkwụ ahazi ugbu a.
44L Njikwa ọkụ mgbaama okporo ụzọ
Mgbama okporo ụzọ nwere akara mgbaama okporo ụzọ nwere ọgụgụ isi, nke nwere ike ịnakọta oke nha nke okporo ụzọ na-aga site na eriri mmetụta ala nke ụzọ ọ bụla iji gbasaa ma ọ bụ belata oge ọkụ na-acha uhie uhie.
Onye njikwa ọkụ mgbama okporo ụzọ 44way
N'ime oge nhazi oge, ọ dịghị ọrụ maka 10 sekọnd, pụọ na ọnọdụ ntọala, ma weghachi steeti egosiri na Figure 1;enweghị ike ịgụta ọkụ moto etinyere ala.
5 na-ewepụta njikwa ọkụ okporo ụzọ kwụụrụ onwe ya
1. Biko lelee wiring ziri ezi tupu ọkụ;
2. Mgbe ike gbanyechara, ọkụ na-acha odo odo na-egbuke egbuke maka 7 sekọnd;ọ na-atụgharị uhie maka 4 sekọnd, wee banye na steeti nkịtị.
3. Mgbe enweghị arịrịọ onye na-agafe agafe, ma ọ bụ ịgafe ndị na-agafe agafe, na-egosipụta tube dijitalụ dị ka egosiri na Figure.
Ìhè mgbaàmà anyanwụ, Akara ọkụ okporo ụzọ, Ìhè okporo ụzọ anyanwụ, Ọkụ okporo ụzọ na-akwado anyanwụ, Ìhè mgbaàmà okporo ụzọ, Agba mgbama okporo ụzọ,